ကောင်းကင်ကို: 06/01/2012 - 07/01/2012
ဒီနေ့ ကဗျာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လျှပ်စစ် စာမျက်နှာတွေမှာ ပြန်လည်လှန်လှောရင်းနဲ့ Chinese Poem အကြောင်းနဲ့ အဲဒီ့အတိုင်း စဉ်းစားပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတပုဒ် အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။
Chinese Poem အကြောင်းကတော့ မြန်မာလို ဘာသာပြန်လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ကိုဇေယျ (http://www.facebook.com/thatsforyouall) ဆီမှာလို့ ထင်ပါတယ်။ အတိအကျ မမှတ်မိတော့ပါ။ ၁၀၁ ဇင်ပုံပြင် website http://www.101zenstories.com/index.php?story=88 website မှာ ရှိပါတယ်။
(A well-known Japanese poet was asked how to composeaChinese poem.
But these girls slay men with their eyes. )
နာမည်ကြီး ဂျပန်ကဗျာဆရာ တယောက်ဟာ တရုတ်ကဗျာ တပုဒ်ကို ဘယ်လို ရေးရမလဲလို့ အမေးခံရပါတယ်။ အဲဒီ့မှာ ဂျပန်ကဗျာဆရာ ပြန်ဖြေဒါက ဒီလိုပါ။
ပုံမှန် Chinese poem တွေမှာ စာလေးကြောင်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ပထမ တကြောင်းမှာ အကြောင်းအရာ တခုခုနဲ့ စတင်ရပါတယ်။ ဒုတိယ တကြောင်းမှာလည်း အဲဒီ့ အကြောင်းအရာကို ဆက်ပြီး (ထပ်ချဲ့ပြီး) ပြောရပါတယ်။ တတိယအကြောင်းမှာတော့ အကြောင်းအရာသစ် တခုကို (မဆီမဆိုင်အကြောင်းအရာ၊ ဒါပေမဲ့ ပထမ အကြောင်းအရာနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလို့ ရမယ့်ဟာမျိုး) ကို ရေးပါတယ်။ စတုတ္ထ အကြောင်းကတော့ အပေါ်က စာသုံးကြောင်းကို လှလှပပ ဆက်စပ်ပေးမဲ့ ဟာမျိုး ရေးရပါတယ်။
(ကျိုတိုက ပိုးကုန်သည်မှာ သမီးချော နှစ်ယောက် ရှိတယ်။
အကြီးမက ၂၀၊ အငယ်မက ၁၈
စစ်သည်တွေဟာ ဓါးနဲ့ ရန်သူကို သတ်လေ့ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ သမီးချော နှစ်ယောက်ကတော့ သူတို့မျက်လုံးတွေနဲ့ ယောကျာ်းတွေကို သတ်တယ်)
အဲဒီ့နည်းနဲ့ ကဗျာဈာန်ကို နှိုးပြီး ကျနော့် အတွေးတခုကို ကဗျာအဖြစ် ရေးဖူးပါတယ်။ အပေါ်က ဥပမာ ကဗျာလိုတော့ ချစ်စရာ မကောင်းလှပါဘူး။ အမြင်ကတ်စရာတောင် ကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်အတွေးကို ကျနော်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ တန်ဖိုးမထားနိုင်တဲ့ အရာမျိုးဆိုရင်တော့ လူတွေရှေ့မှာ ဘယ်တော့မှ ချပြဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by Kaung Kin Ko at 5:19 PM4comments: Links to this post
John Lennon ဟာ သူ့ဇနီး ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စာရေးဆရာမ Yoko Ono ရဲ့ Grapefruit ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေကနေ... Imagine သီချင်းကို ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ ရှက်စိတ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပိုဒ် နောက်ဆုံးအကြောင်းက ebook ထဲမှာ မပါလို့ ကျနော် ဖြည့်ပြန်ထားတာပါ။ “Imagine all the people living for today” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းပါ။ “စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…လူသားအားလုံး ဒီနေ့ (ပစ္စုပ္ပန်) အတွက် နေနေကြတယ်လို့”
ကဲ…(John Lennon ရဲ့သီချင်းလေးကို) version အမျိုးမျိုးနဲ့ နားထောင်ကြည့်ရအောင်။ ဒါကတော့ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Bill Clinton နဲ့ အစ္စရေးအဆိုတော်၊ အာရပ်ကလေးငယ်တွေနဲ့ အစ္စရေး ကလေးငယ်တွေ အတူတူ ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ John Lennon သီဆိုထားတာပါ။ Lyrics နဲ့ တကွ ကြည့်ရှုနားဆင် နိုင်ပါတယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 11:57 AM2comments: Links to this post
အိပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေသူများအား အနှိုးရခက်။ Racist များ အနာဆုံး စကားလုံးမှာ သူတို့အား racist ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ရှိ။ စစ်ထဲဝင်ရန် ဒေါ်လာ ထောင်နှင့်ချီသော အလုပ်များကိုပင် စွန့်၍ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်တော့မည်ဟု ဆိုသည့် နိုင်ငံတကာမှ မျိုးချစ်များ၏ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအတွက် တဦးချင်း အလှူငွေမှာ (များသောအားဖြင့်) ဒေါ်လာ ၁၀၀ ထက် မပို။ အစိုးရမှ လက်ခံမည် မဟုတ်သော်လည်း မွတ်စလင် ဆိုသူများပင် ဘင်္ဂါလီများကို တိုက်ရန်အတွက် စစ်ထဲဝင်မည်ဟု တကဲကဲ ကြွေးကြော်။ ၂၀၁၂ အတွက် အော်စကာဆုကို မြန်မာနိုင်ငံမှ Facebook users များနှင့် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်တွင် နေထိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသား(ဟောင်း) Facebook users များ ပူးတွဲဆွတ်ခူး။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ အားလုံး စစ်သားဖြစ်လာလျှင် ကမ္ဘာတွင် စစ်အင်အားကြီး နိုင်ငံဖြစ်တော့မည့် အတွက် ဝမ်းမြောက် ဂုဏ်ယူဖွယ်။ ထို့ကြောင့် တချိန်က ကြိုတင် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသော စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို အမြန်ဆုံး ပြဌာန်းပေးပါရန်။ (ကောင်းကင်ကို)
Posted by Kaung Kin Ko at 8:19 AM4comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 3:28 PM 11 comments: Links to this post